Ayuu Ilaahay Yahay? | War Wanaagsan
Ayuu Ilaahay Yahay?
1. Maxaa Ilaahay loo caabudaa?
Ilaaha runta ah waa ka wax kasta abuuray. Bilow iyo dhammaad ma leh. (Sabuurradii 90:2) Warka wanaagsan oo ku qoran Kitaabka Quduuska ah isaguu ka yimid. (1 Timoteyos 1:11) Maadaamuu Ilaahay nolosha ina siiyay waa inaan isaga keliya caabudno.—Akhri Muujintii 4:11.
2. Muxuu Kitaabka Quduuska ah ka sheegay Ilaahay?
Ninna ma arkin Ilaah marnaba waayo ruux buu yahay. Jidh dhiig iyo naf sida binuʼaadanka ma laha. Waxyaalaha dunida ku nool oo dhan uu abuuray buu ka wada sarreeyaa. (Yooxanaa 1:18; 4:24) Hase ahaatee siduu Ilaahay yahay waxaa laga garan karaa wuxuu abuuray. Matalan miraha iyo ubaxa noocyada badan baa ina tusa jacaylkiisa iyo xigmaddiisa. Weynaanta caalamka waxay ina tustaa awoodda Ilaahay.—Akhri Rooma 1:20.
Ilaahay wax badan baan ka sii baran karnaa markaan akhrisanno Kitaabka Quduuska ah. Matalan wuxuu inoo sheegaa wuxuu Ilaahay jecel yahay iyo wuxuunan jeclayn, siduu dadka ula dhaqmo iyo siduu yeelo xaalad kasta ha dhacdee.—Akhri Sabuurradii 103:7-10.
3. Ilaahay magac muu leeyahay?
Ciise wuxuu yiri Ilaahayaga “magacaagu quduus ha ahaado.” (Matayos 6:9) Ilaahay waxyaalo badan baa loogu yeeraa laakiin wuxuu leeyahay magac keliya. Luqad kasta dhawaaq gooni ah bay leedahay laakiinse af Soomaaliga magaciisa waxa loogu dhawaaqaa “Yehowah.”—Akhri Bilowgii 22:14.
Ilaahay magaciisa kutubo badan baa laga saaray oo waxaa lugu beddelay Rabbi ama Ilaah. Laakiinse markii Kitaabka Quduuska ah la qoray magaca Ilaahay 7,000 oo jeer in ka badan buu ku qornaa. Ciise markuu dadka Ilaah barayay wuxuu aqoonsiiyay magaca Ilaahay.—Akhri Yooxanaa 17:26.
Daawo fiidiyowga Ilaahay Magac Muu Leeyahay?
4. Yehowah miyuu ina daneeyaa?
Sida aabbe carruurtiisa aad u jecel buu Ilaahay mustaqbalkeenna imminka u dadaalaa
Silica aad dunida ugu fidsan miyay ka dhigan tahay inuu Yehowah yahay Ilaah ina daneenayn? Dad baa yiraahda Ilaahay wuu ina dhibaateeyaa siduu inoo imtixaamo. Laakiinse waa been.—Akhri Yacquub 1:13.
Ilaahay wuxuu siiyay binuʼaadanka ikhtiyaar. Miyaynan fiicnayn inaan xor u nahay inaan dooranno adeegga Ilaahay? (Yashuuca 24:15) Laakiin dad fara badan baa doorta inay dadka kale waxyaalo xun ku sameeyaan sidaa daraaddeed buu silicu u batay. Xaqdarradan oo kale Ilaahay wuu ka murugoodaa.—Akhri Bilowgii 6:5, 6.
Yehowah waa Ilaah ina daneeya. Wuxuu rabaa inaan nolol fiican yeelanno. Mar dhow wuxuu baabbiʼin doonaa silica iyo kuwa sababa. Laakiin sabab baa jirto uu Ilaahay silica waqti yar u oggolaaday. Casharka 8 baa ina tusi doona waxay sababtaasi tahay.—Akhri 2 Butros 2:9; 3:7, 13.
5. Sidee baan Ilaahay ugu sii dhowaannaa?
Yehowah wuxuu rabaa inaan isaga barinno oona la hadalno sidaan ugu dhowaanno. Isagu si shakhsi ahaan ah buu innagoo dhan inoo daneeyaa. (Sabuurradii 65:2; 145:18) Wuuna raalli ka yahay inuu ina dembidhaafo. Wuu ogyahay dadaalkeenna inaan isaga ka farxinno xitaa haddii aan marmar ku guuleysanin. Inkastoo aan dembilayaal nahay si run ah baan Ilaahay ula yeelan karnaa xiriir wanaagsan.—Akhri Sabuurradii 103:12-14; Yacquub 4:8.
Mar haddii Yehowah nolosha ina siiyay waa inaan isaga dadka kale oo dhan ka sii jeclaanaa. (Markos 12:30) Markaad Ilaahay sii baratid oo ad sameysid wuxuu doonayo jacaylkaad isaga u qabtid baad muujisaa oo waa u sii dhowaan doontaa.—Akhri 1 Timoteyos 2:4; 1 Yooxanaa 5:3.
Wadaag Wadaag Ayuu Ilaahay Yahay?